Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » UN ka hatramin'ny G7: Ny famokarana vaksinin'ny COVID-19 azo antoka dia tsy maintsy mihoatra ny tombom-barotra
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Na eo aza ny famokarana haingana ny vaksinin'ny COVID-19 azo antoka sy mahomby, dia tsy narahina ny hetsika haingana hanampiana ny fidirana mitovy amin'ny firenena sy faritra rehetra.
Manampahaizana mahaleo tena sivy no nilaza fa tonga ny fotoana ho an'ny firaisankina iraisam-pirenena sy fiaraha-miasa.
Olona an'arivony tapitrisa ao amin'ny Global South no tavela.
Ny manam-pahaizana momba ny Firenena Mikambana dia nanentana ireo orinasa mpamokatra fanafody hiditra ao amin'ny COVID-19 Technology Access Pool.
"Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana vaksinin'ny COVID-19 izay azo antoka, mahomby, ara-potoana ary mifototra amin'ny fampiharana ny fivoarana ara-tsiansa tsara indrindra", hoy ny manam-pahaizana mialoha ny Fihaonana an-tampon'ny telo andro an'ny vondron'orinasa G7 an'ny firenena mitarika ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, izay manomboka amin'ny zoma.
Tsy misy fotoana ny sakana
Nilaza ireo manam-pahaizana sivy tsy miankina fa tonga ny fotoana "firaisankina iraisampirenena sy fiaraha-miasa" hanampiana ny Governemanta rehetra amin'ny fanaovana vaksinin'olona sy famonjena ain'olona.
"Tsy fotoana hisian'ny fifampiraharahana maharitra na hanaovana lobbying hananganana sakana mba hiarovana ny tombom-barotra ataon'ireo orinasa", hoy izy ireo.
“Olona an'arivony tapitrisa ao amin'ny Global South no tavela. Heverin'izy ireo ho toy ny fatinina na tombontsoa ho an'ny tany mandroso ny vaksinina ", hoy ny fanazavan'ireo manampahaizana, izay, hoy ihany izy ireo," dia hanitatra ny krizy tsy amin'antony, hampitombo be ny isan'ny maty ary hampitombo ny fahasahiranana ara-toekarena, mety hamafy ny voan'ny korontana ara-tsosialy. "
Ataovy loha laharana ny fitoviana
Ireo manampahaizana manokana momba ny zon'olombelona dia namerina ny fanambarany tamin'ny taon-dasa momba ny vidin'ny olombelona noho ny areti-mandringana, tamin'ny filazany fa amin'ny fotoana isian'ny olona an-tapitrisany miatrika fahantrana sy hanoanana dia tsy maintsy ataon'ny mpitondra G7 ho laharam-pahamehana ho azy ireo ny miaro ny ain'ny olona sy ny fahasalamany indrindra amin'ny fiaraha-monina sy toe-javatra mampidi-doza.
“Manaitra izany, araka ny World Health Organization (OMS) tatitra, latsaky ny iray isan-jaton'ny vaksininy rehetra hatreto no lasa nankany amin'ny firenena ambany fidiram-bola ”, hoy izy ireo nanantitrantitra fa tsy tokony ho sakana amin'ny famokarana lafo vidy sy ny fivelarana ny zon'ny manam-pahaizana.
Ny manam-pahaizana momba ny Firenena Mikambana dia nanentana ireo orinasa mpamokatra fanafody hanatevin-daharana ny COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) noho ny fizarana fahalalana, angon-drakitra ary fananana ara-tsaina ary nampahatsiahy fa na ny Fifanarahana TRIP momba ny zon'ny fananana ara-tsaina aza dia manome vahaolana mora foana, anisan'izany ny mety hisian'ny fahazoan-dàlana tsy maintsy atao amin'ny tranga vonjy taitra nasionaly, tsy ampy izy ireo hamaly ny areti-mandringana ankehitriny.
"Ny fanamafisana ny famokarana vaksiny azo antoka dia tokony hatao loha laharana noho ny tombony amin'ny areti-mandringana manerantany", hoy izy ireo. “Ny fanjakana dia tsy maintsy miantoka fa ny fiarovana ara-dalàna ny fananana ara-tsaina sy ny patanty dia tsy manimba ny zon'ny tsirairay hiditra amin'ny vaksinim-piarovana azo antoka, ara-potoana ary mahomby”.
Nampahatsiahy ireo fanjakana ny manampahaizana mba hampifanaraka ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny Fitsipika momba ny zon'olombelona momba ny asa aman-draharaha sy ny zon'olombelona ary hiantohana fa ireo andrim-panjakana misy sehatra maro, toy ny World Trade Organization (WTO), manakana ny orinasam-pandraharahana tsy hanaja ny zon'olombelona. ”
Ny fanamafisana ny famokarana vaksinina azo antoka dia tokony hatao loha laharana noho ny tombony amin'ny areti-mandringana manerantany.